कोरोना लाग्दैमा किन विभेद? – Health Post Nepal
२०७७ असार २८ गते ७:४८
दिनदिनै कोरोना संक्रमित संख्याको गति उकालो लाग्दै गर्दा स्वास्थ्यकर्मीमा पनि त्रास बढ्दै गएको अवस्था छ। हामी अबुझ भएका हौं कि हामीभित्रको मानवीयता हराउँदै गएको हो बुझ्न गाह्रो भयो।
के कोरोना भाइरस हस्पिटलबाटै आएको हो त? यस्तो पनि दिन नआओस् कि सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो, सुगर, प्रेसर हँुदा पनि हस्पिटल जाँदा प्रवेश निषेध भन्दा अनि त्यतिबेला के गर्नुहुन्छ तपाईलाई परेको बेला के कोरोनाले साइड लाग्छु तिमी प्रवेश गर भन्छ र?
अहिले स्वास्थकर्मी देख्दा भाग्छौं भोलि बिरामी हुँदा कहाँ जान्छौं?
यो कोरोना भाइरस हस्पिटलका डाक्टर, नर्सले काखी च्यापेर लत्याएका त होइनन् नि। यिनी तपाईकै समाजबाट पुर्‌याइएको हो।
हुन त अहिलेसम्म प्रायः अस्पतालले अन्य रोगका बिरामीलाई भर्ना गर्दा वा मृत्यु भएपछि मात्र कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। पहिला नै कोरोना भाइरसको रोकथाममा प्रभावकारी कदम (पिसिआर परीक्षण) चालिदिएको भए आज यसरी बुरुरु कोरोना संक्रमित भेटिँदैन थिए होला। आज यो स्थिति आउने थिएन होला।
यस्तै गरी कोरोना संक्रमित बढ्दै गएमा र समाजले आफ्नो दायित्व वहन नगरेमा अबका दिनमा जटिल अवस्था भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। किनकि मलाई कोरोना लागेको छ मलाई भर्ना लिनुस् भन्दा कसैले पनि लिँदैन। मृत्युदेखि सबैलाई डर छ नि? त्यसैले कहिले सासुको पालो कहिले बुहारीको पालो भनेझै नहोस्।
त्यसैले नेपाललाई ब्राजिल र अहिलेको भारत नबनाउन चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन जरुरी छ। त्यहाँ तपाईकै सेवामा रातदिन खटिरहने कतिका दूधेबालक छोडेर मुटु दरिलो बनाई यही सामान्य सुरक्षाकवचमा पीडा र रोदन दबाएर ड्युटी गर्न बाध्य छन्।
बिहान घरका सुतिरहेका बच्चालाई सुम्सुम्याउँदै कतै भरे क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने पो हो कि? न कतै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने पो हो? भन्दै गहभरि आँसु टलपल पार्दै हिँड्दा तपाईको यो समाजको मानवीयताले मलाई जिस्काइरहेको छ।
हो, म पनि हस्पिटलमै काम गर्छु। पहिला मलाई देख्दा म कति बेला हस्पिटल आउँ भन्ने मान्छेहरू ‘अहिले तपाईको हस्पिटलमा कोरोना छ कि छैन’ भनेर दिनहुँ फोनबाट वा भेट्दाखेरि यो प्रश्न ममाथि तेस्र्याइन्छ। म जवाफ दिन्छु यदि कोरोनाको बिरामी आयो भने म के गरुँ उस्लाई नछोउँ? के त्यो बिरामीलाई नहेरुँ?
यदि तपाई कोरोना संक्रमित भएर आउनुभयो भने तपाईलाई हेर्ने कि नहेर्ने? त्यसैले म आफू मात्र सुरक्षित छु अरु सबै कोरोना संक्रमित असुरक्षित भन्ने नसोच्नुस्। तपाईलाई भन्दा ज्यादा डर मलाई पनि छ भनेर जवाफ दिन्छु।
हस्पिटल भनेको बिरामीको उपचार गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँका कर्मचारीले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। के उनीहरूलाई कोरोना भाइरसको डर नहँुदो हो स्वास्थ्यकर्मीले मान्छे बचाउने पो हो त। अहिलेको परिस्थितिमा त सेतो कोट लगाएको मान्छे देख्दा मान्छे नै भाग्न थाले। अहिले पिपिई लगाउँदा सामान्य बिरामी त देखेर साइड लाग्छन्।
यस्तो दिन आउला भनेर सायदै कसैले सोचेका थिए।
एप्रोन देखेर नै डराउनुपर्ने?
स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि डरत्रास दुवै छ। ओठमुख सुकाएर भए पनि अहोरात्र खटिरहनुपर्ने, खटिएवापद यो समाजबाट अपहेलित पनि हुनुपर्ने।
के हामीलाई चाहिँ डर नहुँदो हो? तपाईहरूकै सेवामा कोरोना भाइरसविरुद्ध यो सुरक्षाकवच लगाएर रातदिन पानी मात्र खाएर खटिरहँदा पनि तपाईभित्र दया पलाएन।
यसरी दिनभरि ड्युटी सकेर लखतरान भएर घर फर्किंदा तपाईहरूले मानवीयता नै बिर्सिएर रातको समयमा बास नदिँदा के होला एकचोटि सोच्नुस त?
पहिला त गाडीमा लेखेर हिँड्दा ओ हो डाक्टर रहेछ भन्थे। अहिले त ए कोरोना आयो भन्दै गाउँघरतिर कुरा काट्नेहरूको लर्को चलेको छ।
कहाँ काम गर्ने, कुन हस्पिटलमा काम गर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् कि छैनन् भन्दै चियो गर्दै हिँड्छन्।
न रातमा निद छ न त दिनमा भोक। जतिबेला पनि कोरोना कोरोना भन्ने शब्द कानमा गुन्जिरहन्छ। घाँटीबाट गाँस तल जाला कि भन्दा माथिबाट पो निस्किन
खोज्छ। कस्तो दिन आइलाग्यो अब त। कोरोना भन्ने शब्द सुन्दा पनि टाउको दुख्ने र रिँगटा लाग्ने हुन थाल्यो।
अहिलेको परिस्थितिमा सबैले विपदको सामना त भोग्नैपरेको छ। तर स्वास्थ्यकर्मी र अहिले गाउँबाट कामको खोजीमा भौंतारिएर सहर पसेका व्यक्तिलाई हरेक बहानामा घरबाट निकाल्ने कोसिस नगर्दा राम्रो होला।
सरकारले नेपाली भनेका देशका जनप्रतिनिधिहरू मात्रै हुन् भन्ने सोच्यो। शक्तिका भरमा पिसिआर चेकअप र बाहिरबाट आएको अनुदानमा पनि न एउटा मास्क, न ग्लोब्स, न त एक थोपा स्यानिटाइजर नै जनतालाई दिइयो। जनतालाई दिएको भए केही मात्रामा भए पनि राहत मिल्थ्यो होला नि।
यदि क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको पिसिआर टेस्ट गरिदिएको भए उनीहरू मृत्युको मुखमा धकेलिनुपर्दैन थियो होला। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भइदिएको भइ शंंकास्पद व्यक्तिहरू भाग्दैनन् थिए होलान् एकदिन फेरि साम्य हुनेछ। हामी फेरि पहिलाकै रूपमा फर्किनु छ। त्यसैले सरकार र हामी सबै मिलेर कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सक्ने सामथ्र्य बनाउँ, कोरोना भाइरस भगाउँ।